Vonona ny handoa £ 22 eo ho eo ny brits ho an'ny fitsapana PCR alohan'ny dia iraisam-pirenena
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Vonona ny handoa £ 22 eo ho eo ny brits ho an'ny fitsapana PCR alohan'ny dia iraisam-pirenena
Brits dia niomana handoa £ 22 isaky ny salanisa ho an'ny fitsapana PCR alohan'ny dia iraisam-pirenena
Rehefa afaka 12 volana niarahana tamin'ny fameperana hidin-trano, ny fianakaviana dia tokony hiandrandra ny fandosirana any amin'ny tany mafana kokoa ary hihaona amin'ireo olon-tiany amin'ny fialantsasatra.
Rehefa manakaiky ny fahatsinjovana ny dia iraisam-pirenena dia firenena maro no mitaky ny mpandeha hametraka valim-panadinana PCR ratsy amin'ny fahatongavany
33% amin'ireo mpitsangatsangana britanika dia tsy vonona ny handoa vola amin'ny fitsapana PCR alohan'ny hitetezana iraisam-pirenena
Ny 40% amin'ireo mpandeha anglisy dia tsy handoa ny fianakaviany hanao fitsapana PCR
Fikarohana vaovao iray no nanambara fa vonona handoa £ 22 isan'olona isaky ny salanisan'ny fitsapana PCR (fitsapana COVID) i Brits alohan'ny hirosoana amin'ny dia iraisam-pirenena. Na izany aza, 33% no nilaza fa tsy vonona ny handoa vola amin'ny fanadinana PCR izy ireo - na any an-trano izany na any amin'ny seranam-piaramanidina - alohan'ny handehanana iraisam-pirenena.
Rehefa manakaiky ny fahatsinjovana ny dia iraisam-pirenena dia firenena maro no mitaky ny mpandeha hametraka valim-panadinana PCR ratsy amin'ny fahatongavany, raisina ao anatin'ny fe-potoana iray mialoha ny dia. Tsy mahazo mampiasa ny mpandeha anglisy NHS fitsapana ho an'ny dia lavitra, afa-tsy ireo mpamily mpitatitra entana amin'ny toe-javatra sasany. Ny fandinihana manokana dia mety mitentina £ 120 eny amin'ny arabe ambony na mihoatra ny £ 200 any amin'ny toeram-pitsaboana sasany.
4% monja amin'ireo nohadihadiana no vonona ny handoa £ 75 na mihoatra ho an'ny fitsapana PCR, raha midika izany fa afaka mivezivezy iraisam-pirenena izy ireo, izay mbola ambany lavitra noho ireo fitsapana PCR manokana atolotra amin'izao fotoana izao hahafahana mandeha.
Rehefa afaka 12 volana niarahana tamin'ny fameperana hidin-trano, ny fianakaviana dia tokony hiandrandra ny fandosirana any amin'ny tany mafana kokoa ary hihaona amin'ireo olon-tiany amin'ny fialantsasatra. Na izany aza, 40% no milaza fa tsy vonona ny handoa vola ny fianakavian'izy ireo hanao fitsapana PCR hahafahany mandeha.
Vaovao tsara fa ny ankamaroan'ny mpandeha dia vonona ny hanao fitsapana COVID PCR mba handehanana amin'ny fialantsasatra. Izany dia nilaza fa ny vidin'ny fanandramana PCR amin'izao fotoana izao dia mahatonga ity safidy ity tsy ho zakan'ny ankamaroan'ny mpandeha mifototra amin'ny zavatra efa nomaniny lany amin'ny fitsapana. Na dia pasipaoro fanaovana vaksiny sy PCR aza dia antenaina ho fepetra roa lehibe ilaina amin'ny fivezivezena indray, mbola misy tsy fahatokisana lehibe izay manova ny mombamomba ny loza mety hitranga amin'ny dia. Mampiseho ny angon-drakitra fa 23% no mbola vonona ny handeha tsy misy saram-pitsaboana sahaza azy, izay mampanahy satria ny ampahany mitovy amin'ireo nangataka (22%) dia nilaza fa tratra am-pandoavana izy ireo rehefa mandeha tsy misy fiantohana.
Ireo mpitsangatsangana dia nanentana mba hanamarina izay takiana FCDO farany sy fitakiana fidirana alohan'ny handehanana ary, ankoatry ny fitsapana PCR na vaksininy, dia alao antoka fa manana fiantohana fiantohana fitsangatsanganana mifandraika sy sahaza ho an'ny firenena andehanana izy ireo.
Ny mpanamory fiaramanidina eropeana dia mirotsaka an-tsehatra amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ireo solika fiaramanidina maharitra
Ny mpitarika ny fizahan-tany dia manokatra ny antso amin'ny governemanta Thai